Xarun loogu talagay ergada shirka Mudug iyo Galgaduud oo Cadaado laga furay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Xarun loogu talagay ergada shirka Mudug iyo Galgaduud oo Cadaado laga furay “Sawirro”
Munaasabadani lagu daah furayay xarun loogu talogalay inay dagaan Ergada shirka maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud oo maanta lagu qabtay isla xarunraasi ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan Ximan iyo Xeeb,xubno ka mid ah guddiga farsamada iyo qeybaha kale ee bulshada.
Siyaasiyiin, Salaadiin, iyo nabadoonno ka kala socday qeybo ka mid ah Mudug iyo Galgaduud oo munaasabadda ka qaybgalay ayaa maamulka Ximan iyo Xeeb iyo ganacsatada deegaanka ku ammaanay diyaarinta xarumihii ay martidu dagi lahayd.
Cowke Xaaji C/raxmaan madaxa qeybta amniga ee guddiga farsamada shirka Mudug iyo Galgaduud oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in xubnaha guddiga ka socda ay meelo badan kormeereen intii ay Cadaado joogeen, waxaana uu xusay in howsha shirku waqti dhow bilaabaneyso.
Wasiirka arrimaha bulshadaa Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye ayaa sheegay in xaruntay oo dhismeheedu soo socday muddo 7-bilood ah ay leedahay Qeybta jiifka oo qaada 700 oo qof, Labahool oo shirarka loogu talogalay, garoon kubadda cagta ah, goob dukaameysi, Maqaaxi, Masjid iyo beero lagu nasto.
Magaalada Cadaado ayaa hadda ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyay ee martigalinta shirka Mudug iyo Galgaduud, iyadoo xilligan ay socdaan hawlo sara oogu qaadayo bilicda magaalada.
Hogaanka AMISOM iyo Xafiiska Qurba joogta ee Wasaaradda arrimaha dibadda oo kulan la qaatay Soomaalida Holland "Sawirro"